Cimilada – Maxaa Loo Bartaa Cimilada? | Tuke Somalism - Tukesomalism.com
Ilhaan Ciise Maxamed — October 27, 2019
Cimilada waxaa lagu qeexaa xaaladaha cimilo gooreed ay meeli leedahay muddo dheer oo lasoo aruuriyay ama la’ogaaday. Soomaaliya oo kale in muddo laqiimeeyo cimiladeeda waxa ey noqaneysaa xaaladda cimilo gooreedka ay leedahay Soomaaliya in la ogaado.
Saynisyahannada ama cilmi baarayaasha waxa ey cimilada ku tilmaamaan in ey tahay cel-celiska ama aruurinta cimilo gooreedka ey leedahay ama lagu qiimeeyay meel gaar ah iyo waqti gaar ahba, inta badan waxaa lasameeyaa cel-celiskaan muddo kabadan 30 sano.
Waxa cel-celiska ama qiimeynta gaarka ah lagu sameynaayo waa xaaladaha cimilo gooreedka sida huurka, heerkulka, xawaaraha dabaysha, ceeryaamad iyo duufaanadaba.
Maxaa Loo Bartaa Cimilada?
Isbeddelada Cimilada ku dhaco.
Saameynta ey cimilada kulleedahay aadanaha.
Saameynta aadanaha uu kulleeyahay cimilada.
Isbeddelka cimilada waxa ey saameyn kulleedahay aadamiga dunidaan ku nool, waxa eyna kor u qaaddaa heerkulka dunida.
Isbeddelada cimilada ku dhaca Dalalka waxa ey saameyn kuyeelataa Keymaha cagaaran ee uu leeyahay dalkaas, sidookale waxa ey saameeyaan wax soosaarka beeraha, biyaha iyo caafimaadka dadka ku nool dhulkaas.
Cimilada Maxay Faa’iido Noo Leedahay?
Cimilada waxbadan ayay faa’iido nooleedahay, sababtoo ah haddii ey Soomaaiya baraf ahaan lahayd waxa ey dhibaato ba’an ku noqan lahayd boqollaalka qof ee magaalada bannaankeeda iyo gudaheedaba guryo la’aanta ey ku heyso.
Haddii ey Soomaaliya 12ki bilood oo dhan ey ahaan lahayd roob xayawaano badan ayaa ku dhiman lahaa oo kasuuli lahaa in ey cimilada Soomaaliya kunoolaadaan, maadaama ey qorrax ubbaahanyihiin, sidookalena Arigeenna iyo Idaha dalkeenaba waxa ey noqan lahaayeen kuwo aad u dhogor badan oo qabowga isaga difaaco dhogortooda.
Cimilada waxa ey xaddidaan nooca dhirta iyo xayawaanka ku nool meelaha gaarka ah, sida “Oorso” waxa uu kunnoolyahay dhulka qaboow kumana noolaan karo dhulka lama degaanka ah.
F.G:Cimilada Soomaaliya waa meesha ugu fiican dunidaan aanu kunnoolnahay maantay, maxaa yeelay cimaladeennu waa dhax dhaxaad. Qof kastana wuu ku noolaan karaa wuuna laqabsankaraa nolosha dalkeenna.
Cimilada Maxay Kakoobantahay?
Da’a: wax kasta oo soo da’o sida roobka, barafka iyo dhededaba.
Next post Faa’iidoyinka Ay Biyaha U leeyihiin Jirkeenna
Previous post Kaftan Mise Jaahilnimo?